Ch 2 Luke – 2azụ
Home / Bible / Oziọma Luk / Ch 2 Luke
2:1 Ma ọ mere mgbe ahụ ka ndị a iwu, si Caesar Augustus, nke mere na ụwa dum ga-debara aha.
2:2 Nke a bụ nke mbụ na aha; ọ e mere onye na-achị Syria, Quirinius.
2:3 Madu nile we ga-akpọ, onye nke ọ bụla n'obodo nke ya.
2:4 Mgbe Joseph nwekwara rigoro si na Galili, site n'obodo Nazaret, Judia, obodo David, nke anākpọ Betlehem, n'ihi na ọ bụ nke ụlọ na ezinụlọ David,
2:5 iji kpọọ, Ya na Meri espoused nwunye, bụ onye ya na nwa.
2:6 Mgbe ahụ, ọ mere ka, mgbe ha nọ n'ebe, ubọchi-dechara, nke mere na ọ ga-amụ.
2:7 Na ọ muputara nwa. Na ọ ọbọp ya n'ákwà ọkiké tukwasi ya ke usịnudia ufene, n'ihi na ọ dịghị ụlọ ha na ndi-ije.
2:8 Ma e nwere ndị ọzụzụ atụrụ na otu mpaghara, ịbụ anya, na-eche na ha n'abali ìgwè atụrụ.
2:9 Ma, le, ihe Angel nke Onyenwe anyị guzoro ha nso, na ìhè nke Chineke na-achakwa ha gburugburu, na ha na-gburu na a oké egwu.
2:10 Na Angel sị ha: "Atụla ụjọ. N'ihi na, le, M na-ekwusara unu a oké ọṅụ, nke ga-abụ nke ndị niile.
2:11 N'ihi na Onye Nzọpụta taa a mụrụ gị n'obodo David: ọ bụ ya bụ Kraịst Onyenwe anyị.
2:12 Nke a ga-a ịrịba ama ị: ị ga-ahụ nwa ọhụrụ ọbọp ke swaddling uwe anade ke usịnudia ufene. "
2:13 Na mberede, e nwere ndị Angel a ka ìgwè ndị eluigwe agha, nēto Chineke, si,
2:14 "Ebube Chineke kasị elu, na n'elu ụwa udo ka ndị ikom nke ezi uche. "
2:15 Ma ọ mere na, Mgbe ndị mmụọ ozi ahụ hapụrụ ha wee banye n'eluigwe, ọzùzù-aturu we sirita, "Ka anyị gafere Bethlehem ma hụ na okwu a, nke mere, nke Jehova, bú ekpugheghịrị anyị. "
2:16 Ha wee ngwa ngwa. Ha hu Meri na Josef; na nwa ọhụrụ e anade ke ufene.
2:17 Mgbe ahụ, mgbe ọ hụrụ na nke a, ha ghọtara okwu a gwara ha banyere ihe nwa okoro a.
2:18 Na ndi nile ndi nuru ya tụrụ ha n'anya nke a, na site ihe ndị ahụ nke gwara ha ndị ọzụzụ atụrụ.
2:19 Ma Meri debere ihe ndia, nātughari ha n'obi-ya.
2:20 Na ndị ọzụzụ atụrụ laghachiri, otuto ma na-eto Chineke maka ihe niile ha nụrụ ma hụ, dị nnọọ ka a kọọrọ ha.
2:21 Na mgbe ụbọchị asatọ-agwụsị, ya na nwa na-enweghị ga-úgwù, kpọ aha-ya JESUS, dị nnọọ ka ọ na-akpọ site na Angel tupu a tụrụ ime ya.
2:22 Na mgbe ụbọchị nke ya ọcha mezuru, dika iwu nke Moses, ha we me ya ka Jerusalem, iji chee ya n'ihu Jehova,
2:23 dị nnọọ ka e dere n'iwu Jehova, "N'ihi na nwoke ọ bụla nke meghere akpa nwa, agākpọ ya ihe nsọ nye Onye-nwe-ayi,"
2:24 na iji chụọ àjà, dị ka ihe e kwuru na iwu Jehova, "A ụzọ nduru ma ọ bụ ụmụ kpalakwukwu abụọ."
2:25 Ma, le, e nwere otu nwoke na Jerusalem, aha-ya bu Simeon, na nwoke a bụ nnọọ na-atụ egwu Chineke, echere nkasi-obi nke Israel. Na Mmụọ Nsọ bụ na ya.
2:26 Na ọ natara azịza nke Mmụọ Nsọ: na ọ gaghị ahụ ọnwụ nke ya mgbe ọ hụrụ Kraịst nke Jehova.
2:27 O wee na Mmụọ nsọ. Na mgbe nwa Jesus e me na nne na nna, iji eme ya n'ihi dị ka omenala nke iwu,
2:28 o nwekwara ya elu, n'aka ya, o gọzie Chineke, sị:
2:29 "Ugbu a, ị nwere ike na-eleghara gị na ohu gị na udo, O nwe-ayi, dị ka i kwuru.
2:30 N'ihi na anya m ahụwo nzọpụta gị,
2:31 nke i doziri n'iru ndi nile:
2:32 ìhè nke mkpughe nke ndị mba na ebube nke ndị gị bụ Izrel. "
2:33 Na nna ya na nne nọ na-eche ihe ndị a ihe, nke e kwuru banyere ya.
2:34 Simeon we gọzie ha, ọ si ya na nne ya Mary: "Lee, A setịpụụrụ mbibi na mbilite n'ọnwụ nke ọtụtụ ndị n'Izrel, na dị ka a ihe ịrịba ama nke ga-megidere.
2:35 Na a mma agha ga-agabiga mkpụrụ obi gị na, nke mere na echiche nke ọtụtụ obi nwere ike na-ekpughe. "
2:36 Na e nwere onye amụma, Anna, a nwa Penuel, site kwa n'ebo Asha. Ọ na nnọọ agadi, na ya ebiwo na ya na di ya ruo afọ asaa site na-amaghị nwoke.
2:37 Ma mgbe ahụ na ọ bụ nwaanyị di ya nwụrụ, ọbụna ya iri-na-afọ nke anọ. Na-enweghị na-apụ apụ n'ụlọ nsọ, ọ bụ a ohu na-ebu ọnụ na-ekpe ekpere, abalị na ehihie.
2:38 Na-abanye n'otu hour, o kwupụtara Jehova. O kwuru okwu banyere ya ndị niile na-echere mgbapụta nke Israel.
2:39 Ma mgbe ha mezuru ihe nile nke di ka iwu nke Onye-nwe, ha we laghachi na Galili, ka ha obodo, Nazareth.
2:40 Ugbu a nwa na-eto, ọ na ike na ozuzu nke amamihe. Na amara nke Chineke dị n'ime ya.
2:44 Ma, supposing that he was in the company, they went a day’s journey, seeking him among their relatives and acquaintances.
2:45 And not finding him, ha we laghachi na Jerusalem, seeking him.
2:46 Ma ọ mere na, mgbe ụbọchị atọ gasịrị, they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, listening to them and questioning them.
2:48 Na n'elu hụrụ ya, ha na-eche. And his mother said to him: "Nwa, why have you acted this way toward us? Le, your father and I were seeking you in sorrow.”
2:49 Na ọ sịrị ha: “How is it that you were seeking me? For did you not know that it is necessary for me to be in these things which are of my Father?"